သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုချီးမြှင့် Abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင် Mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
comments: လေ့လာမှုဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် neuroplastic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေပျေါပေါကျနိုငျပါပြသထားတယ်။ ဤအာရုံခံဆဲလျအကိုင်းအခက်တိုးတက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အားကောင်းတုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည်။ ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, သဘာဝစစ်ကူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 မေလ 1; 67 (9): 872-9 ။ EPub 2009 ဒီဇင်ဘာ 16 ။
နောက်ခံ: အလွဲသုံးစားမှုသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတွင် neuron ပွောငျးလဲသွေးဆောင်ရှိရာ mesolimbic စနစ်, အပေါ်ဆုံ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ဒီစနစ်အတွက် plasticity စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
နည်းနာ: အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး (AMPH) ရက်နေ့တွင်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ Golgi-impregnated dendrites နှင့်ကျောရိုး (NAc) ဆဲလ်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤ parameters တွေကိုအပေါ်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမျးသပျခဲ့သညျ။
ရလဒ်: တစ်ဦး sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ပထမဦးစွာထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ AMPH မှလိင်နုံထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် 1,7နှင့် 28 ရက်ပေါင်းလေ့လာသည်။ ဒုတိယအချက်မှာလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ AMPH ၏တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးပြလိင်နုံယောက်ျားထက် AMPH ၏အနိမ့်ဆေးများများအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကို, ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Golgi-ကော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအတူ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် dendrites နှင့်ကျောရိုး၏တိုးချဲ့နံပါတ်များကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ခုပွောငျးလဲ 7-10 ကာလ၏ abstinence တဲ့ကာလအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။
နိဂုံးချုပ်: လိင်အတွေ့အကြုံကို psychostimulants ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ဆင်တူသည့် mesolimbic စနစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် morphological ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုမှတပါး, ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်ပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း mesolimbic စနစ်၏ neuroplasticity အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, အကြံပြု, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် NAc အာရုံခံ၏ dendritic Arbore များအတွက်တိုးမြှင့်အကျိုးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ mesolimbic စနစ်အချို့ပြောင်းလဲမှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသည်ဘုံများမှာနှင့်အထွေထွေအားဖြည့်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဟားဗတ်၏မူပိုင် 2010 Society က။ All rights reserved Elsevier Inc ကိုထုတ်ဝေသည်။
keywords: dopamine, နျူကလိယ accumbens, psychostimulant, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, dendritic ကျောရိုး
နျူကလီးယပ် accumbens မှစီမံချက်များနှင့်အတူ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် dopaminergic အာရုံခံပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါ mesolimbic dopamine (DA) စနစ်, (NAc) နှင့် prefrontal cortex (mPFC) medial သည်လှုံ့ဆျောနှင့်အပါအဝင်အပြုအမူများ၏အကြိုးရှုထောင့်တစ်ဦးဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ ကျူးကျော် (1), (နို့တိုက်ကျွေးမှု2-7), (သောက်သုံး8), (အဖော်ရှာ9-11) နှင့်လူမှုရေးဘွန်း (12-13) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး (ထို mesolimbic DA system ကိုအပေါ်သို့ဆုံ14-15) ။ ထိုမှတပါး, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (အလှည့်မူးယစ် relapse ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် putative အခန်းကဏ္ဍကြောင်း, ဤလမ်းကြောင်းအတွက်အာရုံခံပွောငျးလဲသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်16-18) ။ r ကို၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများepeated မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး psychostimulants နှင့် opiates တစ်ဦးထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည် (19-21), တခုတိုးမြှင့်အေးစက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (22-24), တစ်ဦးကြိမ်မြောက် (ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုအဘို့အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုတိုးလာ25) ။ အဆိုပါ mesolimbic circui တစ်လျှောက်လုံး dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲအပြောင်းအလဲများအတွက်ထို့ပြင်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးရလဒ်များကိုt ကို (16, 26-31)နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများကို induces (32-35). နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး midbrain dopamine အာရုံခံအပေါ် excitatory နှင့် inhibitory synapses မှာ Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပွောငျးလဲ (36-41), နှင့် NAc အတွက်အာရုံခံ (42-44) ။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်အလားတူပွောငျးလဲသဘာဝကဆုလာဘ်မှအထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လျှင်၎င်းသည်လက်ရှိတွင်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပွောငျးလဲနှင့်အတူထပ်သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထူးခြားသောရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်များ compulsive ရှာနှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်ဆုလာဘ်အားဖြည့်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုအခြေခံဆယ်လူလာယန္တယား၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများထက်အခြားလှုံ့ဆော်မှုသောအယူအဆထောက်ပံ့သည့် mesolimbic စနစ်တွင်အာရုံခံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ် (စိတ်ဖိစီးလှုံ့ဆော်မှု dopamine စနစ်များကိုသက်ဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များမှာ45-47), နှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်ာင်းစေ (21, 48-50) နှင့် Self-အုပ်ချုပ်မှုမော်ဒယ်တွေအတွက် relapse (51-54) ။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (သဘာဝကြိုးအပြုအမူတွေကိုလည်း DA စနစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ6, 55-56). ထို့ကြောင့်အယူအဆအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ locomotor sensitive က conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့် NAc အာရုံခံ၏ dendrite shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့် mesolimbic DA သည့်စနစ်အတွင်းအာရုံခံပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းစမျးသပျခံခဲ့ရ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ (အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြော plasticity ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်) မှတစ်ဦး abstinence ကာလမူးယစ်ဆေးထံမှ abstinence ကြောင်းမကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဤအပြောင်းအလဲများကိုစတင်ခြင်းများအတွက်အရေးပါကြောင်းတွေးဆ40, 57-59).
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (210-250 ဂရမ်) Harlan ဓာတ်ခွဲခန်း (Indianapolis, IN, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သို့မဟုတ်ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Senneville, QC, ကနေဒါ) မှရရှိသောနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြွန်နှင့်အတူ Plexiglas လှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အထီးအထီးလေ့လာမှုစတင်ခြင်းမှာတစ်ခုတည်းသျောခဲ့ကြသည်သောစမ်းသပ်မှု2မှလွဲ. , ထိုစမ်းသပ်ချက် (စမ်းသပ်ချက် 5-1) တစ်လျှောက်လုံးအတူတူလိင်အားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အပူချိန်-စညျးမဉျြးစညျးကမျးကိုလိုနီအခန်းထဲမှာအစားအစာနှင့်မရရှိနိုင်ပါသည်ရေနှင့် 12 / 12 နာရီအလင်းမှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. ။ မိတ်လိုက်အပြုအမူအစည်းအဝေးများဘို့နှိုးဆွအမျိုးသမီး (210-220 ဂရမ်) မြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized တို့ 5% estradiol benzoate နဲ့ 95% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 နာရီစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 0.1 ml ကိုနှမ်းဆီ4μgအဓိကချို့ယွင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်နှင့်အနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြု, နှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သော NIH နှင့် CCAC လမ်းညွှန်ချက်တညီတည်းခဲ့ကြသည်။
D-ဖက်တမင်းဆေးပြား (AMPH) sulfate (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မြုံ 0.9% ဆား (SAL) အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ တိရစ္ဆာန်များ 0.5mL / ကီလိုဂရမ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ် volume ထဲမှာအခမဲ့အခြေစိုက်စခန်းပေါ်မှာအခြေပြုတွက်ချက် 5.0-1 mg / kg ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, အထိ AMPH ဆေးများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များ SAL ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးထိုးသည့်အမူအကျင့်ယန္တရားသို့ကြိုတင်နေရာချထားဖို့ချက်ချင်း, (အပေါ်အလင်းအိမ်ပြီးနောက် 2-6 နာရီ) အလင်းကိုအဆင့်၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းအရေပြားအောက်ဆုံးပေးထားခဲ့ကြသည်။
Locomotor Activity ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
Locomotor လှုပ်ရှားမှုထုံးစံ-ဒီဇိုင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုအခန်းများ Segal နဲ့ Kuczenski ကဒီဇိုင်းအခန်းများအပေါ်လုပ်ပါတယ် (LACs), (သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်60) ။ Locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ် 16 × 16 photobeam ခင်းကျင်း (San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာနှင့်မိနစ် (s) ကိုတစ်ဦးလျှင် crossover အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက crossover အတွက် shaded ဒေသများအဖြစ်ပုံဖော်, တိရစ္ဆာန်အခနျး၏ "တက်ကြွသောဇုန်" ၏မည်သည့်ထဲသို့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ပုံ 1A (61).
ဆားသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ Locomotor တုံ့ပြန်မှု။ တစ်ဦးက locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသောဇုန်မြေပုံ၏တစ်ဦးသိထားပုံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက crossover တိရစ္ဆာန်မှောင်ခိုတဦးဝင်သောအသီးအသီးအချိန်မှတျတမျးတငျထား ...
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကြွက်ကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရင်တော့မှားမယ်ကျန်ရစ်ဖြစ်စေကြောင်းအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အတှေ့အကွုံအဘို့, အားလုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေမှိန်အနီရောင်အလင်းအောက်မှာအမှောင်အဆင့် (အလင်းအိမ်ပြီးနောက် 3-8 နာရီကိုချွတ်) ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်ကြွင်းသောတိရိစ္ဆာန်များဤအရပ်မှနှောင့်အယှက်, ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ဝေးကွာသောအမျိုးသမီးအနံ့အလားတူအဆင့်ဆင့်ထိတွေ့, လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားကဲ့သို့တူညီသောအခန်းကိုင်တွယ်နှင့်သျောခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အဘို့, လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျား၏အုပ်စုများ (သုတ်ရည်လွှတ်၏နံပါတ်များ, နှင့်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromission မှ latency အပေါ်အခြေခံပြီး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမိတ်လိုက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော Paradigm အသုံးပြုသွားမည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်, လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့ပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆိုသို့မဟုတ်5မိနစ် (သုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်)3copulatory စီးရီး, များအတွက်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated ထားတဲ့ကာလအတွင်းဆိတ်ကွယ်ရာ 4-3 ရက်, လှပတဲ့ 60 ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျော်ကိုငါးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ copulatory စီးရီးပြီးစီးခဲ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များလိင်အတွေ့အကြုံရထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်မခံမယူခဲ့ပါဘူး။ EA ၏; နုံဆား:; အတွေ့အကြုံဖက်တမင်းဆေးပြားနဲ့ NA: ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါတစ်ခုမှာအပတ်ကလိင်ကြုံတွေ့နှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ AMPH (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ်လေးခုအုပ်စုများ၏စုစုပေါင်း SAL (နုံဖက်တမင်းဆေးပြားကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည် NS; နှင့် အတွေ့အကြုံရှိဆားငန်: ES; ဎ =6တစ်ခုချင်းစီ) ။
1: ဒီစမ်းသပ်မှုသုံးခုနည်းလမ်းစမ်းသပ်မှု 1 ထံမှကွဲပြားပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များရက်ဆက်တိုက်ကာလအတွင်းတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated;2။ သူတို့ (အ LACs အတွက်) AMPH ခံသောကာလ၌ရှိသကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များတူညီတဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated;3။ AMPH အောက်ပါ Locomotor လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် LACs နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်း7ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ LACs အတွက်နေရာချထားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို၏နိဒါန်းအကြား 15 မိနစ်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့သည်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များမိတ်လိုက်မပါဘဲခုနစျပါးဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများများအတွက် LACs ၌ထားကြ၏။ EA ၏; နုံဆား:; အတွေ့အကြုံဖက်တမင်းဆေးပြားနဲ့ NA: နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခု (ထိုစမ်းသပ်မှုနေ့ 8) အောက်ပါနေ့ကို, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် AMPH (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ် SAL (နုံဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏ LACs ချက်ချင်းအောက်ပါဆေးထိုး၌ထားကြ၏ NS; နှင့်အတွေ့အကြုံဆား: ES; ဎ = 8-9 တစ်ခုချင်းစီ) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခု (နေ့ 14) အောက်ပါတစ်ပတ်ထပ် LACs အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ နေ့ 8 အပေါ် AMPH လက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနေ့ 14 အပေါ် SAL လက်ခံရရှိနှင့်နေ့ 8 အပေါ် SAL လက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနေ့ 14 အပေါ် AMPH ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဝက် (Data ဤအစီရင်ခံစာအတွက်မပါ) RNA ထုတ်ယူမှုအတွက်တနေ့အကြာတွင်ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခု (နေ့ 35) ကိုအောက်ပါလတိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့တစ်ဝက် (နုံ, ဎ = 8; အတွေ့အကြုံ, ဎ = 9) AMPH နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဒေတာကို AMPH သို့မဟုတ် SAL ဆေးထိုးအောက်ပါ3မိနစ် 90 မိနစ် bins အတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များအသီးအသီးအုပ်စု SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပြသခြင်းနှင့် Two-လမ်း ANOVA (စမ်းသပ်မှု 1, စမ်းသပ်မှု2ရက်ပေါင်း 8-14: အချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, မူးယစ်ဆေးကုသမှု) သုံးပြီးဆန်းစစ်နေကြသည်, ဒါမှမဟုတ်တလမ်း ANOVA (စမ်းသပ်မှု2နေ့က 35 နှင့်လှုပ်ရှားမှု အစည်းအဝေးများအဖော်ရှာမတိုင်မီ; အချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ) ။ post-hoc နှိုင်းယှဉ် p-value ကို <0.05 မှာသတ်မှတ်အရေးပါမှုနှင့်အတူ Fisher က LSD စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အေးစက်နေရာဦးစားပေးမှု (CPP က) စမ်းသပ်ခြင်း
CPP ကသေးငယ်တဲ့ဗဟိုဖြင့်ခွဲခြားနှစ်ခုပိုကြီးတဲ့, ပြင်အခန်းများအမြင်အာရုံနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောတွေကိုအားဖြင့် (28 × 22 × 21cm) သိသာစွာကွဲပြား၏ပါဝင်သည်ရာသုံးအခန်းယန္တရား (Med Associates မှ Inc ကို, စိန့် Albans, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် အခန်း (13 × 12 × 21cm) ။ အဆိုပါယန္တရားခြေရာခံခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၏ automated ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဓာတ်ပုံထုပ်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
CPP ကအေးစက်နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအလင်းကိုကာလ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ဦးက pretest တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်၏ကနဦး preference ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေအခန်းသုံးစွဲအချိန်ကာလအကြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါနေ့ရက်တွင်, ထီးကြွက်ဖြစ်စေသည့် AMPH-တွဲအခန်းထဲသို့သို့မဟုတ် 30 မိနစ် SAL-တွဲအခန်းထဲသို့သွားလာခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ဦး counterbalanced ထုံးစံ၌အောက်ပါနေ့ကဆန့်ကျင်ဘက်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ pretest ဖို့လုပျထုံးလုပျနညျးတူညီခဲ့ကြောင်းတစ် posttest နောက်ဆုံးနေ့၌ကောက်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါလိင်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ5ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နေ့ 1 ပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက်နေ့ကတာဝန်ကျခဲ့တယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးယောက်ျားလိင်ရင်တော့မှားမယ်ကျန်ရစ်ပေမယ့် 1 ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်း5နာရီများအတွက်သန့်ရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ N0.5, N1.0, N2.5 သို့မဟုတ် N5.0, ဎ = 7-8 တစ်ဦးချင်းစီ; အတွေ့အကြုံ: E0, E0.5, E1.0, E2.5 သို့မဟုတ် E5.0, ဎ =6နုံ (; တိရစ္ဆာန်များ AMPH (SC mg / kg) ၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည် -9 တစ်ခုချင်းစီ) ။ Pretest, နေ့ 14 အပေါ်ရက်ပေါင်း 15 နှင့် 16 အပေါ်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့သည်, နေ့ 17 အပေါ် posttest ။ ဤသည်အချိန်ဇယားကိုအေးစက်မတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence ၏ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
လိင်ကြုံတွေ့အထီး5စမ်းသပ်ဖို့တူညီအဖော်ရှာ၏3ရက်ဆက်တိုက်မှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကရရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု4အတူ key ကိုခြားနားချက်အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence မရှိကာလရှိခဲ့ပါသည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရရှိမှုစဉ်တွင် CPP ကစမ်းသပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုပထမဦးဆုံး3မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအောက်ပါစတင်ခဲ့သည်။ N0.5, N1.0, N2.5 သို့မဟုတ် N5.0, ဎ = 6-8 တစ်ဦးချင်းစီ; အတွေ့အကြုံ: E0, E0.5, E1.0, E2.5 သို့မဟုတ် E5.0, ဎ =7နုံ (; တိရစ္ဆာန်များ AMPH (SC mg / kg) ၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည် -11 တစ်ခုချင်းစီ) ။
CPP ရမှတ်များတစ်ခုချင်းစီအတွက် imal တစ်ခုအတွက်တွက်ချက်သည် posttest အနုတ်အကြာစမ်းသပ်မှုအတွင်းတွဲအခန်းထဲရှိအချိန် (စက္ကန့်) ။ အုပ်စု၏နည်းလမ်းများကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့် SAL- ကုသသောအုပ်စု (E0) နှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါက t-tests ကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်များအတွက်အရေးပါမှုကို p- တန်ဖိုးကို <0.05 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာနှင့် 60 ရက်ဆက်တိုက်ကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆိုတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်7မိနစ်သည်အထိမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးယောက်ျားလိင်ရင်တော့မှားမယ်ကျန်ရစ်, ဒါပေမယ့်ခုနစျပါးရက်ဆက်တိုက်ဘို့မိမိတို့နေအိမ်လှောင်အိမ်ကနေခေါ်ဆောင် 30 မိနစ်တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့အဘို့စင်ကြယ်စမ်းသပ်လှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session တစ်ခုဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်လှောင်အိမ်မှထိတွေ့မှုကအောက်ပါအတွေ့အကြုံရှိသို့မဟုတ်ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏အဖွဲ့များဖြစ်စေတနေ့ယဇျပူဇျောခဲ့ကြ (N1; ဎ = 5; E1;; ဎ = 7) သို့မဟုတ်7ရက်ပေါင်း (ဎ =7တစ်ဦးချင်းစီ N7, E5) ။ လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများအတှေ့အကွုံအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session တစ်ခုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်မှထိတွေ့မှုကအောက်ပါတစ်နေ့မှာတော့သို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုဒီယမ် pentobarbital (ip) ၏တစ်ဦးအလွန်အကျွံပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ဆား၏ 500 mL နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် Pugh နှင့်ရော့စီ (ထံမှအဆင်ပြေအောင်တစ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး Golgi-ကော့အစွန်းအထင်းအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်62) ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုဘို့ 1 ဖြည့်စွက်.
ကင်မရာ Lucida ရေးဆွဲတစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အတွက် caudal NAc core နဲ့ shell ကိုငျဒသေအတွက် 5-7 အာရုံခံထားခဲ့ကြသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုလုံးကိုဒါမှမဟုတ် dendritic အကိုင်းအခက်အများစုမြင်နိုင်နှင့်အိမ်နီးချင်းဆဲလ်ကနေခွဲခြားရန်လွယ်ကူသောအဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ Dendritic အကိုင်းအခက် (centrifugal အမိန့်ဖြင့် quantified ခဲ့ကြသည်63) နှင့်တိရစ္ဆာန်အနှုန်းပျမ်းမျှတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ Dendritic ကျောရိုးဆဲလ်နှုန်းနှစ်ခုဒုတိယအလို့ငှာ dendrites တစ် 40 μmအရှည် (တိရိစ္ဆာန်နှုန်း 4-7 ဆဲလ်) တွင် quantified ခဲ့ကြသည်။ နှင့်အဘို့အ Fisher က LSD စမ်းသပ်မှု: Group မှနည်းလမ်းတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA (လိင်အတွေ့အကြုံနှင့် abstinence ကာလအချက်များ) ကို အသုံးပြု. နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
စမ်းသပ်မှု 1 ၏ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအထီးကြွက်များတွင် AMPH ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး 90 မိနစ်ကာလအတွင်း Locomotor လှုပ်ရှားမှု 0.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH သို့မဟုတ် SAL နှင့်အတူကုသမှုအောက်ပါလိင်ကြုံတွေ့နှင့်ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များတွင်တိုင်းတာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ထံမှရလဒ်များအတွက်သရုပ်ဖော်ကြသည် ပုံ 1။ လိင်အတွေ့အကြုံကို (F ကိုနှစ်ဦးစလုံး1,22= 15.88; p = 0.0006) နှင့်မူးယစ်ဆေးကုသမှု (F ကို1,22= 45.00; p <0.0001) သည် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပြီးလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုအကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (F)1,1,22= 14.27; p = 0.0010) ။ အထူးရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်များသင့်လျော်သော SAL ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPH တစ်ခုသိသိသာသာတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPH တစ်ခုတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသ။ လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်ကြွက် SAL သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
30 မိနစ်နှင့်3မိနစ်ငယ်များအချိန်ကြားကာလအတွက် AMPH ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှု၏ analysis အတွက်သရုပ်ဖော်ကြသည် ပုံ 1, ပြား CF. လိင်ကြုံတွေ့အထီး 90 မိနစ်စမ်းသပ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPH တစ်ခုတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသ။ ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသာနောက်ဆုံး 90 မိနစ်ကြားကာလအတွင်းသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသနေစဉ်ထိုမှတပါး, လိင်ကြုံတွေ့ကြွက် (က, 30 မိနစ်စမ်းသပ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့ SAL ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPH တစ်ခုတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသပုံ 1; p-တန်ဖိုးများ) ကိန်းဂဏန်းဒဏ္ဍာရီထဲမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
စမ်းသပ်မှု2၏ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရလဒ်များကိုလျှင်ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်း mated ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်, သူတို့ AMPH ထိတွေ့နေကြရသောကာလ၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် locomotor ာင်းအတွက်စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ လိင်-တွဲပတ်ဝန်းကျင်ကို exposure (ကြိုတင်တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session ကိုရန် 15 မိနစ်ကာလအတွင်းတိုးချဲ့ locomotor လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေဖြည့်စွက် 1 အတွက်ပုံ S1), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားသင်ယူအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ဖော်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စမ်းသပ်မှု2လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင် AMPH မှ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းယာယီပုံစံစုံစမ်းစစ်ဆေး။ AMPH သို့မဟုတ် SAL ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုကနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါတနေ့ (နေ့ 8), တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ် (နေ့ 14) နှင့်တစ်လ (နေ့ 35) တိုင်းတာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ၌ရှိသကဲ့သို့, လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPH ဖို့ သာ. ကြီးမြတ် locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသ။ ထို့အပြင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးသုံးစမ်းသပ်ခြင်းရက်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ပုံ2အများဆုံးကြံ့ခိုင်ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ထားတဲ့စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံး 60 မိနစ်အတွင်းမှာ locomotor လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်နှင့်ပထမဦးဆုံး 30 မိနစ်ဒေတာမှာပြသနေကြသည် ပုံ S2 (1 ဖြည့်စွက်)။ (ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များစမ်းသပ်ကာလ၏မည်သည့်ရက်တွင် SAL သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားဘူး, သူတို့ရဲ့ SAL ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ AMPH လက်ခံရရှိကြောင်းကြွက်တိုးလာ locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသပုံ 2; p-တန်ဖိုးများ) ကိန်းဂဏန်းဒဏ္ဍာရီထဲမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
တနေ့အုပ်ချုပ်ဆားသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးမှလိင်ကြုံတွေ့နှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ Locomotor တုံ့ပြန်မှု (နေ့ 8; A, B), တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ် (နေ့ 14; ကို C, D ကို) သို့မဟုတ်တစ်လ (နေ့ 35; အီးအက်ဖ်) တွင်ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ ။ ဆိုလို +/- စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ SEM ...
စမ်းသပ်မှု3conditional AMPH ဆုလာဘ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကစုံစမ်းစစ်ဆေး။ AMPH CPP ကနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ 10 ရက်ပေါင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအနေနဲ့မြှင့်တင်ရန် conditional AMPH ဆုလာဘ်ပြသပါ။ အထူးသလိင်ကြုံတွေ့အထီး 0.5 နှင့် 1.0 ၏အောက်ပိုင်းဆေးများနှင့်အတူ AMPH-တွဲအခန်းထဲကအဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကို 2.5 သို့မဟုတ် 5.0 / ကီလိုဂရမ် MG မြင့်ဆေးများနှင့်အတူ / ကီလိုဂရမ် MG သော်လည်းမဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကိုသာပိုမိုမြင့်မားဆေးများနှင့်အတူ AMPH-တွဲအခန်းထဲကအဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့, 2.5 နှင့် 5.0 အောက်ပိုင်းဆေးများ (/ ကီလိုဂရမ် MG မဟုတ်,ပုံ 3A; p-တန်ဖိုးများ) ကိန်းဂဏန်းဒဏ္ဍာရီထဲမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
10 ရက်ပေါင်း (က) အောက်ပါသို့မဟုတ် (ခ) မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းဖြစ်စေစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်လိင်ကြုံတွေ့နှင့်နုံတိရစ္ဆာန်များ၏အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေး။ ဆိုလို +/- သည့်အတွက် AMPH-တွဲအခန်းကုန်သည့်အချိန်အဖြစ်သတ်မှတ် CPP ကရမှတ်၏ SEM, ...
စမ်းသပ်မှု3abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတစ်တိုးမြှင် conditional AMPH ဆုလာဘ်အတွက်ရလဒ်ကြောင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု4conditional AMPH ဆုလာဘ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု abstinence ၏ဤကာလအပေါ်မှီခိုခဲ့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ရလဒ်များလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ AMPH တစ်ခုတိုးလာအေးစက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုမပြခဲ့ဘူးကြောင်းညွှန်ပြ။ လိင်ကြုံတွေ့နှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ 2.5 နှင့် 5.0 မီလီဂရမ် / kg မြင့်ဆေးများနှင့်အတူ AMPH-တွဲအခန်းထဲကအဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်မလိင်ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်ရင်တော့မှားမယ်အထီး 0.5 နှင့် 1.0 mg / kg ဆေးထိုး၏အောက်ပိုင်းဆေးများနှင့်အတူတစ်ဦးတိုးလာ CPP ကရမှတ်ပြသခဲ့သည်။ (0.5 မီလီဂရမ် / kg နိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောပင်တစ်ခုခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်ဒီ AMPH-တွဲအခန်းထဲကအဘို့ကိုသာလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိပုံ 3B; p-တန်ဖိုးများ) ကိန်းဂဏန်းဒဏ္ဍာရီထဲမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
စမ်းသပ်မှု5၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအတှေ့အကွုံအောက်ပါတို့သည် mesolimbic စနစ်, အထူး NAc အတွက် morphological ပွောငျးလဲဆနျးစစျဖို့ပဲ။ Morphological ပွောငျးလဲ (တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ထင်ရှားခဲ့ကြပုံ 4H, ဂျေနဲ့ L; p-တန်ဖိုးများ (တနေ့) ကိုပုံဒဏ္ဍာရီထဲမှာစာရင်း, ဒါပေမယ့်ကြသည်မဟုတ်ပုံ 4G, ငါနှင့် K သည်), နောက်ဆုံးသောမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ။ အထူးသဖြင့်, dendrites (တိုးလာ dendritic အကိုင်း၏ညွှန်ပြ) ၏နံပါတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုး (NAc core နဲ့ shell ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပုံ 4H နှင့် J) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်များကိုသိသိသာသာ (လိင်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်တနေ့တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်, နှစ်ဦးစလုံးအခွံနှင့်အမာခံဒေသများအတွက်တိုးလာပေမယ့်မခံခဲ့ရပါပုံ 4L).
လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက် Dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်စားလှယ် NAc shell ကို၏ပုံရိပ်များ (A, B) နှင့်ကင်မရာ lucida ရေးဆွဲ (C, D) ကရုပ်ပြ dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်များတစ်ခုတိုးစေ၏ ...
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် Post-အတွေ့အကြုံကို abstinence အထီးကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် morphological ပွောငျးလဲသွေးဆောင်ကြောင်းပြသသည်။ functional ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါ AMPH နဲ့တိုးမြှင့်အေးစက်ဆုလာဘ်၏ပုံစံအတွက်ထင်ရှားရှိကြ၏။
အဆိုပါ sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အစောပိုင်း 1 တစ်ရက်အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် 28 ရက်ပေါင်းအထိထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်. ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အမြှင့်တင်ရန် conditional AMPH ဆုလာဘ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ဦးထံမှ abstinence ကာလအောက်ပါသာထင်ရှားခဲ့သည်။ NAc နှစ်ခုစလုံး core နဲ့ shell ကိုငျဒသေအတွက် Morphological ပွောငျးလဲလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ,7နေ့က 1 ရက်ပေါင်းလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်မခံခဲ့ရပါ။ အတူတူကဤဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ mesolimbic စနစ် plasticity induces နှင့်မိတ်လိုက်ရာမှတစ်ဦး abstinence ကာလအားလုံး mesolimbic စနစ်ကအပြောင်းအလဲများကိုတချို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်, မဟုတ်ကြောင်းကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာကောင်းစွာ (အတူတူပင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုလုပ်ရပ်၏သဘာဝအကြိုးအပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအသိအမှတ်ပြု64) ။ အမှန်စင်စစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ကြိုးအပြုအမူတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိခိုက်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့ကြ65-67), အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင် (67-70) ။ ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်ပွောငျးလဲမူးယစ်ဆေးဝါးကနေဆုတ်ခွာသို့မဟုတ် abstinence ကာလအပေါ်မှီခိုနေကြအဖြစ်မူးယစ်ဆေးပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်။ လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိတွေ့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုန့်ပြန်ပွောငျးလဲကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာလိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက် AMPH ၏ locomotor သက်ရောက်မှုမှ sensitized, ဤဖြစ်စဉ်ကြာရှည်ခံ-ရှည်လျားမိတ်လိုက်ရာမှတစ်ဦး abstinence ကာလ၏လွတ်လပ်သောကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုမိတ်လိုက်အချိန်ဇယားသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်၏လွတ်လပ်သောကြီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုကဲ့သို့တူညီသောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းဆက်တိုက်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်စေမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ S ကအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်ကောက်ယူ tudies လိင်ကြုံတွေ့အမျိုးသမီးဟမ်းစတား AMPH-သွေးဆောင် locomotor တုံ့ပြန်မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုလျင်မြန်စတင်ခြင်းဖော်ပြရန်ကြောင်းပြသ လိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှု (နှိုင်းယှဉ်71) ။ သို့သော်ကြွက် (psychostimulants မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphic တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြရန်72-73) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်တွေ့ရှိချက်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်, အထီးကြွက်အတွက်အစာရှောင်ခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါ psychostimulants ဖို့မြှင့်တင်ရန် locomotor တုံ့ပြန်မှု၏ရှည်လျားသောကြာချိန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ element တွေကို AMPH locomotor ာင်းဖို့အထောက်အကူနှင့်လူမှုရေး interaction ကလုံလောက်သောလျှင်ရသောလက်ရှိလေ့လာမှုများအနေဖြင့်မရှင်းလင်းသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံများအတွက်စံရောက်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းစမ်းသပ်မှု2အတွက်တိရစ္ဆာန်များ (တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ပြသပေမယ့်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသုက်5မှ copulate ဘူး) (တစ်ဦးထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုမပြခဲ့ပါဘူးဖြည့်စွက်3အတွက်ပုံ S1) ။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုအထီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်မရှိဘဲလက်ခံအမျိုးသမီးထိတွေ့ခဲ့ပြီးသောစဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေ, ဒါမှမဟုတ်တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ပြသ, AMPH မှထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်မရာ၏ခဲ့သည် (ဖြည့်စွက်4အတွက်ပုံ S1) ။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေး interaction က AMPH ာင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပေါ်လာပါဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲသုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်သုတ်ရည်ထိ plasticity ၏ဤပုံစံများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပုံပေါ်ပါတယ်။
တစ်ဦးထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုများအပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ AMPH ၏အခြေအနေဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ထံမှ abstinence အောက်ပါ။ CPP ကသုံးပြီးယခင်အလုပ် (psychostimulants သို့မဟုတ် opiates ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် locomotor ာင်းနှင့်အညီမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားကြောင်းပြသထားပါတယ်22-24) ။ မူးယစ်ဆေး pre-ကုသမှု၏ချုပ်ရာအောက်ပါ5ရက်ပေါင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကင်း (10 / ကီလိုဂရမ် mg), d- စိတ်ကြွဆေး (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက် (5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ဖြစ်စေ၏3နေ့ရက်ကာလအဘို့ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု sensitizes ။ အဆိုပါထိခိုက်သက်ရောက်မှု (3 ထံမှ2မှ) နည်းပါးလာအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေနှင့် SAL pre-ကုသထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်မူးယစ်ဆေးဆေးများနှင့်အတူတစ်ဦးသောအခြေအနေများ preference ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပြသခဲ့ပါသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆိုပါ sensitized conditional ဆုလာဘ်ကိုကင်းများ၏နောက်ဆုံး pretreatment (ပြီးနောက်,7ရက်ပေါင်း 14 ရက်ပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်မခံခဲ့ရ23) ။ အေးစက်မူးယစ်ဆေး pre-ကုသမှုပြီးနောက် 5, 5.0, ဒါမှမဟုတ်3ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါမော်ဖင်းအကိုက် (10 mg / kg) ၏ 21 ရက်ပေါင်းအသုံးချဖို့အလားတူလေ့လာမှုမော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးအေးစက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုပြသထားတယ်။ ဤသည်တိုးပွားတုံ့ပြန်မှု (မော်ဖင်းအကိုက် Pre-ကုသမှုအောက်ပါပျက်ကွက် 1 နေ့24) ။ S ကတွေ့ရှိချက် uch ကအနည်းဆုံး3ကာလ၏မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာတဲ့ကာလ psychostimulants နှင့် opiate နှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက်ထိခိုက်သို့မဟုတ် Cross-sensitized conditional ဆုလာဘ်အတွက်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုs ကို။ S ကအကျိုးကိုအားဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်က exual အတွေ့အကြုံ, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တူ, ဒီထိခိုက်မူးယစ်ဆေးတုန့်ပြန်များအတွက်တာဝန်ရှိ mesolimbic စနစ်အလားတူ neuroadaptations instilling နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဆုလာဘ် abstinence စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျှင်လက်ရှိမသိရသေးသည်နှင့်အရှင်လေ့လာတွေ့ရှိပြောင်းလဲရန်ပံ့ပိုးနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ရှင်းနေသည်မှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ခုဆက်စပ်မှုတွေရှိပါတယ်။ ဆုချလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံး၏ကြာရှည်သက်ရောက်မှုဘုံဆယ်လူလာသို့မဟုတ်မော်လီကျူးယန္တရားများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်အကြံပြု။ သို့အတွက်ကြောင့်လိင်အပြုအမူ-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအားဖြည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်အရှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြိုးအပြုအမူတွေ၏အပြုသဘောအားကောင်းဘို့အရေးပါဖြစ်မည်အကြောင်းတွေးဆသည်။ H ကိုowever, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကနေနောက်ဆက်တွဲ abstinence တစ်ဦး '' မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏ပေါက်ဖွား '' တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်ရှာ, ဒါမှမဟုတ် abstinence ၏သက်ရောက်မှုဆင်တူစွဲလမ်းတ္ထုများ၏သက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက်တစ်ခုပြည်နယ်သွေးဆောင်ခြင်းငှါ (25, 33, 74) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (သုတ်ရည်ထိ-အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အေးစက်စမ်းသပ်ချက်ကို အသုံးပြု. ပြသ, လိင်ရှာ compulsive ဖြစ်ပေါ်စေသည်ပါဘူး75), abstinence ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစမ်းသပ်ပြီးရသေးပေမယ့်။
Dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏နယ်ပယ်များတွင်အတိမ်အနက်အတွက်လေ့လာခဲ့ပြီး76-77) နှင့်စွဲလမ်း (59, 78-79), နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလွှမ်းမိုးခံရဖို့လူသိများသည် (80) နှင့်ဟော်မုန်းအချက်များ (81-82). အဆိုပါ Synaptic သွင်းအားစု dendrites သို့မဟုတ် dendritic ကျောရိုးအပေါ်အများစုဖြစ်ကြသည်ကတည်းကသူတို့အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် neuroplasticity ၏အရှိဆုံးဖွယ်ရှိပစ်မှတ်များမှာ (26, 83). gonadal ဟော်မုန်း၏သဘာဝအတက်အကျသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအများအပြားနာရီအတွင်း dendritic ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်တွေ့ပါပြီ (84-87) ။ တစ်ဦးကအဆိုပါစနစ် lso, ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း, ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှု (88) သို့မဟုတ်နာတာရှည်ကိုကင်း (79), 24 နာရီအတွင်း dendritic ကိုပြောင်းလဲရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုများ 24 နာရီအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်မဟုတ်, နှင့်အစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါ abstinence တဲ့ကာလလိုအပ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲ psychostimulants ဖို့အထပ်ထပ်ထိတွေ့အောက်ပါမြင်ကြသူတွေကိုတူ (16-17, 26, 30) ။ shell ကိုအတွက် dendrites နှင့်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လျော့နည်းသွားအရေအတွက်ကိုအတွက် NAc ရလဒ်များကိုအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, DA လျော့ကျ (18, 89). ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ NAc အတွက် endogenous DA အရေးယူမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် morphological ပွောငျးလဲပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါသာထင်ရှား7လက်ထက်၌နှင့်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့် conditional AMPH ဆုလာဘ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးတွင်ဤတိုး AMPH, y ကမှရေတိုရေရှည် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့မလိုအပ်ပါကြောင်းအကြံပြုet ထိခိုက်လွယ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ရေရှည်စကားရပ်ထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေစေခြင်းငှါ။ ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးယခင်လေ့လာမှုများရေရှည်ထိခိုက်စေသည့် NAc အတွက် morphological ပွောငျးလဲ (အကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်လည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြ89-94) ။ ဒါဟာ functional ဖြစ်စေဆီလျော်သည့် morphological ပွောငျးလဲ၏ကဘာလဲဆိုတာမသိရသေးဖြစ်နေဆဲပေမယ့် function ကိုများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
သဘာဝအကြိုးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု - - ထို mesolimbic စနစ်ကြာရှည် neuroadaptations သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီမှာတင်ဆက်ဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အမူအကျင့် plasticity, အထူးသဖြင့်တစ်ဦး sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုချက်ချင်းရေရှည်ရလဒ်ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး abstinence ကာလ NAc နှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင် conditional မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အတွက်လေ့လာ morphological အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အရေးပါ neuroadaptations ဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေး-sensitized တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ဤအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြော plasticity အလားတူပေမယ့်တူညီဘဲ, ပရိုဖိုင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း။ ကျနော်တို့သဘာဝဆုလာဘ်အနေဖြင့်တစ်ဦး abstinence မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးအားနည်းချက်ပြည်နယ် induces ကြောင်းကိုပြသပြီးကတည်းကဤရွေ့ကား data တွေကိုသီးခြားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြသည်။ အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံး neuroadaptations ယေဘုယျအားဖြင့်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုပိုကောင်းဥာဏ်နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ကိုများကိုပေးစွမ်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ယန္တယားသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါဖြစ်စေတဲ့သည်ဤစနစ်များကိုသက်ဝင်ပုံကိုနားလည်ခြင်း။
ဒေါက်တာ Richtand NIH နှင့်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှစစ်ပြန်ရေးရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနဝန်ဆောင်မှုကနေထောက်ပံ့ကြေးရန်ပုံငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Richtand သစ်တောဆေးဝါး, Bristol က-Meyer Squibb နှင့် Gerson Lehrman Group မှတစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မူပြီးမှကတင်ပြထားပါတယ်; Bristol က Meyer ရဲ့ Squibb နှင့် Schering-လယ်ထွန်ခြင်းကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏စပီကာရဲ့ဗျူရိုကျ, ဂရန်းမှတင်ဆက်စာရငျး: တောင်ဒါကိုတာနှင့် Scius, LLC ၏တက္ကသိုလ်ဆေးပညာ Sanford ကျောင်း, Janssen ဆေးဝါးသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Astra Zeneca ဆေးဝါး (သာလေ့လာမှုမူးယစ်): မှစ. ထောက်ပံ့ငွေထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute (R01 DA014591) ကနျြးမာရေးသုတေသန (RN 014705), နှင့်အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီကနေဒါ Institutes: အားလုံးသည်အခြားစာရေးဆရာများကဒီသုတေသနကိုထောကျပံ့ဖို့အောက်ပါထောက်ပံ့ငွေ မှလွဲ. မရှိပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုသတင်းပို့ ဒေါက်တာ Lique Coolen မှကနေဒါ (NSERC) Discovery Grant က (341710), နှင့် PGS-M Kyle အိုးမှ NSERC (360696) မှပညာသင်ဆု၏။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအကူအညီအတွက် Golgi အပြောင်းအလဲနဲ့ဒေါက်တာခရစ္စ Tenk နှင့်အတူသူမ၏အကူအညီမစ္စ Maureen 1 Fitzgerald ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖြည့်စွက်စမ်းသပ်မှု 1.
1. Pucilowski အို Kostowski ဒဗလျူတက်ကြွအပြုအမူနှင့်အလယ်ပိုင်း serotonergic စနစ်များကို။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1983;9: 33-48 ။ [PubMed]
2. ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွဟာ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1988;44: 599-606 ။ [PubMed]
3. နိုကို MB, ပညာရှိ RA ။ တစ်ဦးရွေးချယ် mu သို့မဟုတ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် opioid ၏ Ventral tegmental ထိုးအစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်အစာကျွေးမြှင့်တင်ရန်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1995;673: 304-312 ။ [PubMed]
4. Martel P ကို, mesolimbic dopaminergic သည့်စနစ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မျိုချမိပါအစားအစာပမာဏ၏ Fantino အမ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1996;55: 297-302 ။
5. Martel P ကို, အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခု function ကိုအဖြစ် Fantino အမ် Mesolimbic dopaminergic စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1996;53: 221-226 ။
6. Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2008;32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားနဲ့အဆီ Bing စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမှုရှိသည်။ အစာအာဟာရ၏ဂျာနယ်။ 2009;139: 623-628 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. Yoshida M က, Yokoo H ကို, et al Mizoguchi K ကို Kawahara H ကို, Tsuda တစ်ဦးက, Nishikawa T က။ အတွက် Vivo microdialysis အားဖြင့်တိုင်းတာခြင်း: စားသောက်အကြောင်းရင်းမှာနျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ neuroscience အက္ခရာများ။ 1992;139: 73-76 ။ [PubMed]
9. Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, Wenkstern DG, Blaha CD ကို, Phillips က AG က, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1990;530: 345-348 ။ [PubMed]
10 ။ ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 718-730 ။ [PubMed]
11 ။ Kohlert JG, Meisel RL ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုမိတ်လိုက်-related နျူကလိယအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens sensitizes ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1999;99: 45-52 ။ [PubMed]
12 ။ လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2001;40: 133-138 ။ [PubMed]
13 ။ လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2004;7: 1048-1054 ။
14 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ စွဲလမ်းတစ် psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ Psychol ဗျာ 1987;94: 469-492 ။ [PubMed]
15 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1988;85: 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1999;11: 1598-1604 ။ [PubMed]
17 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses (နယူးယောက်, NY ။ 2001;39: 257-266 ။
18 ။ Meredith GE, Ypma P ကို, Zahm DS ။ ကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 1995;15: 3808-3820 ။ [PubMed]
19 ။ Post ကို RM, ကြွက်များတွင်ထပ်တလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင်းဆီအိပ်ချ်တိုးမြှင်ဆိုးကျိုးများ။ သဘာဝ။ 1976;260: 731-732 ။ [PubMed]
20 ။ Segal DS, ကထပ်လောင်း AJ ။ D-စိတ်ကြွဆေး၏ရေရှည်အုပ်ချုပ်ရေး: မော်တာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ stereotypy ၏တိုးတက်သောတိုးပွား။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1974;2: 249-255 ။
21 ။ Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopamine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1991;16: 223-244 ။ [PubMed]
22 ။ လက်တ BT ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုစိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်ထက်လျော့။ Psychopharmacology ။ 1989;98: 357-362 ။ [PubMed]
23 ။ Shippenberg TS, Heidbreder C. အသိကိုကင်းများ၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ: pharmacological နှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဟော်မုန်းများ၏ဂျာနယ်။ 1995;273: 808-815 ။ [PubMed]
24 ။ Shippenberg TS, Heidbreder ကို C, Lefevour အေအသိမြှမော်ဖင်းအကိုက်၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ: ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1996;299: 33-39 ။ [PubMed]
25 ။ Crombag HS, Bossert JM, Koya အီး, Shaham Y. ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့ context-သွေးဆောင် relapse: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ လန်ဒန် Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအ။ 2008;363: 3233-3243 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
27 ။ လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်မြဲစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏တည်နေရာနှင့်-putamen caudate ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28: 1082-1085 ။ [PubMed]
28 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, ဗေ့ခ်ျ VR, Kolb ခနေရာအနှံ့ပေမယ် dendritic နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကျောရိုး, hippocampus နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ neocortex အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် experimenter- ၏ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses (နယူးယောက်, NY ။ 2002;46: 271-279 ။
29 ။ ဘရောင်း RW, Kolb ခနီကိုတင်းာင်းနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် cingulate cortex အတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2001;899: 94-100 ။ [PubMed]
30 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 8491-8497 ။ [PubMed]
31 ။ Sarti က F, Borgland SL, Kharazia VN, Bonci အေထူးခြားသောကင်းထိတွေ့ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာရေရှည်အလားအလာပွောငျးလဲ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2007;26: 749-756 ။ [PubMed]
32 ။ Bower က MS, McFarland K ကိုရေကန် RW, Peterson YK, Lapish CC ကို, Gregory ML, et al ။3အချက်ပြ, G ပရိုတိန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်: ကင်းထိခိုက်စေမူးယစ်ဆေးရှာတဲ့တံခါးစောင့်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004;42: 269-281 ။ [PubMed]
33 ။ လမ်းကြောင်းပြ lu, L, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီဂျေ, လျူ SY, Bossert JM, Shaham Y. ဗဟို ERK amygdala ကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားဖို့အရေးကြီးသည်။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2005;8: 212-219 ။
34 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2003;6: 1208-1215 ။
35 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ Neuroplasticity ပြောင်းလဲဗီဇစကားရပ်ကကမကထပြုခဲ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 3-17 ။ [PubMed]
36 ။ Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003;37: 577-582 ။ [PubMed]
37 ။ Nugent FS, Kauer ဂျေအေ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကျော်လွန်ပြီး GABAergic synapses ၏ LTP ။ ဇီဝြဖစ်စဉ်အဆိုပါဂျာနယ်။ 2008;586: 1487-1493 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Nugent FS, Penick EC, Kauer ဂျေအေ။ Opioids inhibitory synapses ၏ရေရှည်အလားအလာပိတ်ဆို့။ သဘာဝ။ 2007;446: 1086-1090 ။ [PubMed]
39 ။ Kauer ဂျေအေ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု VTA synapses မှာဘုံပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003;37: 549-550 ။ [PubMed]
40 ။ Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2007;8: 844-858 ။
41 ။ လျူ QS, ပူး, L, Poo MM ။ Vivo အတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက် LTP သော induction နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝ။ 2005;437: 1027-1031 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ သောမတ်စ် MJ, Beurrier ကို C, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2001;4: 1217-1223 ။
43 ။ သောမတ်စ် MJ, Malenka RC ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ် Synaptic plasticity ။ လန်ဒန် Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအ။ 2003;358: 815-819 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ သောမတ်စ် MJ, Malenka RC, အ mesolimbic စနစ် dopamine ခြင်းဖြင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ Bonci အေ Modulation ။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 5581-5586 ။ [PubMed]
45 ။ Thierry လေး, Tassin JP, Blanc, G, စိတ်ဖိစီးမှုများက mesocortical DA စနစ်၏ Glowinski ဂျေရွေးချယ် activation ။ သဘာဝ။ 1976;263: 242-244 ။ [PubMed]
46 ။ de Jong က JG, Wasilewski M က, ဗန် der Vegt BJ, Buwalda B, Koolhaas JM ။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ကြွဆေးမှရေတိုရေရှည်အမူအကျင့်ာင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2005;83: 805-811 ။ [PubMed]
47 ။ Tidey JW, Miczek Ka ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုရွေးချယ် mesocorticolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1996;721: 140-149 ။ [PubMed]
48 ။ Mathews IZ, Mills က RG, မက်ကော်မစ် CM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ကြွဆေး conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့် locomotor ာင်းနှစ်ဦးစလုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ dev Psychobiol ။ 2008;50: 451-459 ။ [PubMed]
49 ။ Yap JJ, Covington သူ, 3rd, Gale MC, Datta R ကို, Miczek Ka ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်အမူအကျင့်ာင်း: mGluR5 နှင့် NMDA receptors မှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ Psychopharmacology ။ 2005;179: 230-239 ။ [PubMed]
50 ။ Miczek Ka, Covington သူ, 3rd, Nikulina EM, Jr, Hammer RP ။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်: peptidergic နှင့် aminergic mesocorticolimbic ဆားကစ်အတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်မြဲဆိုးကျိုးများ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2004;27: 787-802 ။ [PubMed]
51 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 247-291 ။ [PubMed]
52 ။ Leri က F, Flores J ကို, Rodaros: D, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သော်လည်း stria terminalis ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ noradrenergic ရန်၏ပြုတ်ရည်များကမပေးကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ၏ Stewart ကဂျေပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 5713-5718 ။ [PubMed]
53 ။ Marinelli M က, Piazza PV ။ glucocorticoid ဟော်မုန်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2002;16: 387-394 ။ [PubMed]
54 ။ Piazza PV, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1998;19: 67-74 ။ [PubMed]
55 ။ Meisel RL, Mullins AJ ။ ဆယ်လူလာယန္တယားများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ: အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံကို။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2006;1126: 56-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56 ။ Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, Kumar ကတစ်ဦး, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ ဝံပုလွေ ME, Sun က X ကို, Mangiavacchi S က, Chao SZ ။ Psychomotor စိတ်ကြွဆေးနှင့်အာရုံခံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 61-79 ။ [PubMed]
58 ။ သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. Neuroplasticity အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲပါ။ ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2008;154: 327-342 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2001;2: 119-128 ။
60 ။ Segal DS, တစ်ခုတည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှတုန့်ပြန်အတွက် Kuczenski R. တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: အမူအကျင့်လက္ခဏာများနှင့် neurochemical Correlate ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဟော်မုန်းများ၏ဂျာနယ်။ 1987;242: 917-926 ။ [PubMed]
61 ။ Pritchard LM, Logue အေဒီ, ဟေးယက်က S, Welge ဂျာ ​​Xu M က, Zhang က J ကို, et al ။ 7-Oh-DPAT နှင့် PD 128907 ရွေးချယ်တဲ့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် D3 dopamine အဲဒီ receptor ကိုသက်ဝင်။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28: 100-107 ။ [PubMed]
62 ။ Pugh ဘီစီ, ရော့စီ ML ။ Golgi-ကော့၏တစ်ဦးက paraffin ဖယောင်း technique ကိုအခြားအ histological နှင့် immunocytochemical နည်းစနစ်များ၏ပူးတွဲလျှောက်လွှာခွင့်ပြုထားကြောင်း CNS impregnated ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ပျော့ပျောင်း။ 1993;39: 97-105 ။ [PubMed]
63 ။ Uylings HB, dendritic Arbore quantifying များအတွက်ဗန်ရေဂျေဆောင်ရွက်ချက်များ။ ကွန်ယက် (Bristol ကအင်္ဂလန်) 2002;13: 397-414 ။
64 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2006;29: 565-598 ။
65 ။ della Maggiore V ကို, Ralph MR ။ ရွေ့လျားအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်အသုံးပြုသွားမည်ယင်းမော်တာစက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အဆိုပါပြေးဘီး vs. လွင်ပြင်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2000;65: 585-590 ။
66 ။ Aragona BJ, Detwiler JM, အ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုလာဘ်။ neuroscience အက္ခရာများ။ 2007;418: 190-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
67 ။ Avena မိုင်, Hoebel BG ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-sensitized ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်-သွေးဆောင် hyperactivity (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) နှင့်သကြား hyperphagia ပြသပါ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2003;74: 635-639 ။
68 ။ Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux ၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 1999;19: 456-463 ။ [PubMed]
69 ။ ဘားလေး, Fiorino DF, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးကအရှိန်မြင့်တက်လာထိုးအချိန်ဇယားကနေဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1999;64: 597-604 ။
70 ။ Mitchell က JB ယခင်ကမော်ဖင်းအကိုက်စနစ်တကျထိုးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Stewart ကဂျေနည်းပြ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1990;35: 367-372 ။
71 ။ Bradley KC, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏လိင်အမူအကျင့်သော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 2123-2130 ။ [PubMed]
72 ။ Castner လုပ် SA, Xiao L ကို, Becker က JB ။ striatal dopamine အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: Vivo microdialysis နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1993;610: 127-134 ။ [PubMed]
73 ။ Becker က JB, Molenda H ကို, Hummer DL ။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဖြန်ဖြေယန္တရားများအဘို့အဂယက်ရိုက်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2001;937: 172-187 ။ [PubMed]
74 ။ Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. Neuroadaptation ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ။ 2001;412: 141-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
75 ။ Agmo အေသုတ်ရည်ထိ-ဆက်ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှိအေးစက်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုနှစ်ခုအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သက်သေအထောက်အထား။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2002;77: 425-435 ။ [PubMed]
76 ။ Chang-FL, Greenough WT ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအုပ်စုခွဲ-ဦးနှောက်ကြွက်များတွင်စိမျး dendritic အပေါ် monocular သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1982;232: 283-292 ။ [PubMed]
77 ။ ဗန် Reempts J ကို, Dikova M က, Werbrouck L ကို, Clincke, G, သင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြွက် hippocampus အတွက် Borgers အမ် Synaptic plasticity ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1992;51: 179-183 ။ [PubMed]
78 ။ Nestler EJ, Aghajanian GK ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအခြေခံ။ သိပ္ပံ။ 1997;278: 58-63 ။ [PubMed]
79 ။ Norrholm SD, Bibb ဂျာ Nestler EJ, Ouimet CC ကို, တေလာ JR, နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2003;116: 19-22 ။ [PubMed]
80 ။ Rosenzweig MR, Bennett က EL ။ plasticity ၏ Psychobiology: ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်သင်တန်းနှင့်အတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1996;78: 57-65 ။ [PubMed]
81 ။ အဒမ် VL, Goodman RL, Salm AK, Coolen LM, Karsch FJ, Lehman MN ။ အဆိုပါတခြားသောအတွက်ရာသီအလိုက်မွေးမြူရေးများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြော circuitry အတွက် Morphological plasticity ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2006;147: 4843-4851 ။ [PubMed]
82 ။ Jansen HT, Cutter ကို C, Hardy က S, Lehman MN, Goodman RL ။ ဖော်ထုတ် GnRH သွင်းအားစုများနှင့် glial အသင်းအဖွဲ့ပြောင်းလဲမှုများ: အ gonadotropin-releasing ဟော်မုန်းဟာတခြားသော၏ (GnRH) စနစ်အတွင်းရာသီအလိုက် plasticity ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2003;144: 3663-3676 ။ [PubMed]
83 ။ Lamprecht R ကို, LeDoux ဂျေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2004;5: 45-54 ။
84 ။ သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Woolley CS, Frankfurt M က, McEwen BS ။ Gonadal steroids လူကြီးအတွက် hippocampal ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 1990;10: 1286-1291 ။ [PubMed]
85 ။ Woolley CS, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Frankfurt M က, McEwen BS ။ သဘာဝကျကျအရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ပွောငျးခွငျးဖြစ်ပေါ်။ J ကို neuroscience ။ 1990;10: 4035-4039 ။ [PubMed]
86 ။ က de Castilhos J ကိုလေးဆယ် CD ကို, Achaval M က, Rasia-Filho AA ကို။ တစ်ဦး Golgi လေ့လာမှု: posterodorsal medial amygdala အာရုံခံ၏ Dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် gonadectomy နှင့်လိင် Steroid တစ်မျိုးထိန်းသိမ်းရေးကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2008;1240: 73-81 ။ [PubMed]
87 ။ Schwarz JM, Liang SL, Thompson က SM, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM ။ Estradiol အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် hypothalamic dendritic ကျောရိုး induces: စည်းရုံးရေးလိင်ကွဲပြားမှုများအတွက်ယန္တရား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;58: 584-598 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ Dallas ကို C, Whetstone AS, Hodes GE, Shor တီဂျေ။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုပုလ်အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်စက်ဘီး၏ hippocampus အတွက် dendritic ကျောရိုးအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ neuroscience အက္ခရာများ။ 2009;449: 52-56 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
89 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခမော်ဖင်းအကိုက်အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ neocortex အတွက်အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပွောငျးလဲ။ synapses (နယူးယောက်, NY ။ 1999;33: 160-162 ။
90 ။ Vezina P ကို, Giovino AA ကို, ပညာရှိ RA, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ locomotor ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုအကြား Stewart ကဂျေပတ်ဝန်းကျင်-တိကျတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1989;32: 581-584 ။
91 ။ Cunningham ST, ဖင်လန်က M, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏အခန်းကဏ္ဍ: ထပ်ခါတလဲလဲ opiate ထိတွေ့ပြီးနောက် psychostimulants ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုအသိ။ Neuropsychopharmacology ။ 1997;16: 147-155 ။ [PubMed]
92 ။ Spanagel R ကို, Shippenberg TS ။ ကြွက်များတွင် endogenous Kappa opioid စနစ်များအားဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Modulation ။ neuroscience အက္ခရာများ။ 1993;153: 232-236 ။ [PubMed]
93 ။ အဆိုတော် BF, Tanabe LM, Gorny, G, et al Jake-Matthews, C, Li က Y ကို, Kolb B က။ Rat Forebrain အတွက် Dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများမဟုတ်ဘဲက Non-Associative မူးယစ်ဆေးအသိထက် Associative မူးယစ်ဆေးအခြေအနေများသတင်းထောက်။ Biol Psyc 2009
94 ။ Pulipparacharuvil S က, Renthal W က, et al Hale က CF, Taniguchi M က, Xiao, G, Kumar ကတစ်ဦး။ ကိုကင်း Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းချုပ်ဖို့ MEF2 ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;59: 621-633 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]